Imakethe yamathuluzi kagesi kulindeleke ukuthi ikhule ku-CAGR ka-8.5% eminyakeni eyisikhombisa ezayo.
Amathuluzi kagesi ayiguqulile indlela ezakhiwa ngayo izimboni zokwakha, ezezimoto nezinye njengokonga isikhathi nemizamo ekusebenzeni okuyinkimbinkimbi okubandakanya ukushayela ngezikulufo, ukusika nokwephula, kanye nokuvuselelwa njalo kwamathuluzi kagesi kusizile ekufuneni izidingo. Ngaphezu kwalokho, i-ea ...
Amathuluzi angaphandle anamathela kakhulu ekuzuzweni kwenani lenkampani. Ozakwethu basekhaya bathembele kumxhaso kanye nemali engenayo. Amakhasimende ahlosiwe amathuluzi asekhaya nakwamanye amazwe akhiyiwe ekuqaleni, ezimbonini ezithile, nasezinkampanini ezinamathemba ebhizinisi. Bazibophezele ...
UKUHAMBA KWEZIMakethe Njengamanje, ngokwesimo sebhizinisi lemboni yamathuluzi yaseChina, ingxenye yayo yethula isici esithi "ithuluzi le-e-commerce", sisebenzisa i-Intanethi njengesengezo esiteshini sokumaketha; ngenkathi ihlinzeka ngemikhiqizo enamanani aphansi, ingaxazulula ngokukhalipha i-indus engajulile ...